Somali News Tv » faah faahin kasoo baxaya qarax kadhacay dagmada shibis
faah faahin kasoo baxaya qarax kadhacay dagmada shibis
Qarax ayaa ka dhacay goor dhow qeybo ka mid ah degmada Shibis ee gobolka Banaadir, kaasoo laga maqlay xaafadaha degmadaas iyo degmooyinka ku dhow.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu ka dhacay agagaarka xaafada Maanabooliyo, waxaana la sheegay in gaarigiisa loogu xiray Nin Magaciisa lagu sheegay Cabdalla Axmed Cabdalla kuna magac dheeraa (Shiikh Nuur Codey).
Ninka gaariga qaraxa loogu xiray oo isla goobta ku dhintay ayey goob joogayaal sheegeen inuu ka mid ahaa Jaaliyadda Yemen ee ku dhaqan degmada Shibis.
Lama oga sababta qaraxan loogu xiray gaariga uu watay ninkan ka tirsanaa Jaaliyada Yemen, balse ciidamada amaanka dowlada Somalia oo gaaray goobta ayaa wada baaritaano la xiriira qaraxan.
Dad isugu jiray Masuuliyiin, saraakiil, ganacsato, weriyeyaal iyo qaar kale ayaa horey loogu dilay qaraxyo loogu xiray gaadiid ay wateen, waxaana intooda badan sheegtay Al-Shabaab.